रास्ट्रिय खबर – Page 10 – shubhabihani
Home / रास्ट्रिय खबर (page 10)	रास्ट्रिय खबर	काठमाडौंमै ‘सर्जिकल अट्याक’ गरेर यसरी किड्नी लुटियो ! गौशालामा बेहोस बनाएर भारत पुर्‍याइयो, अनि किड्नी निकालियो
920 Views १४ पुस, काठमाडौं । गोरखा मुचोकका दीपक नेपाली रोजगारीका लागि पोखरामा बस्दै आएका थिए । मजदुरी काम गर्ने १९ वर्षका उनको भेट कास्कीका भीमप्रसाद न्यौपानेसँग भयो ।
राम्रो जागिर लगाइदिन्छु, मेरो प्लाई उद्योग छ भन्दै गत साउनमा न्यौपानेले नेपालीलाई काठमाडौं ल्याए । उनले विकास भन्ने बिनुबहादुर तिमल्सिनासँग भेट गराइदिए । उनले काम दिलाउँछु भनेर प्लाई कम्पनी घुमाए ।
त्यसपछि दीपकमाथि सर्जिकल ढंगबाट आक्रमण भयो । भारतको अस्पतालमा होस खुल्दा उनको अप्रेसन भइसकेको थियो ।
‘कम्पनी सबै घुमिस्, अब काममा जानुपर्छ भनेर होटलमा खाजा खुवाउन लगे,’ दीपक सम्झन्छन्, ‘रक्सीमा ट्याब्लेट हालेर खुवाएर मलाई इण्डिया पुर्‍याए ।’
बेहोस बनाएर दीपकलाई रातारात भारतको गाजियावाद पुर्‍याइयो र, त्यहीँ उनको मिर्गौला झिकेर बेचियो । उनी होसमा आउँदा आफूलाई अस्पतालको बेडमा पाए । आफ्नो दायाँ कोखामा चोट देखेर उनी छक्कै परे ।
विकासको समूहले उनलाई अँध्यारोमा तँलाई गुण्डाले चक्कु हान्यो र बेहोस बनायो, त्यसैले उपचार गर्न ल्याएको भने ।
झण्डै दुई महिना उपचारपछि उनी ठीक भए । नेपाल आउने बेलामा उनका हातमा २८ हजार राखिदिए । ‘सर किन पैसा दिएको’ भन्दा ‘तँलाई हामीले उपचार गर्दिहाल्यौं’ भन्ने जवाफ दिए ।
भारतबाट नेपाल आएको केही समयमै उनी बिरामी परे । र, चितवन मेडिकल कलेजमा जचाउन गए । त्यसक्रममा चिकित्सकले तिम्रो त एउटा किड्नी नै छैन भनेपछि उनी छाँगाबाट खसेझै भए ।
दीपककै उजुरीका आधारमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले विकाससहित किड्नी तस्करीमा संलग्न तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काभ्रे महादेवस्थानका विकास सहित दोलखा भीमेश्वरका प्रकाश बस्नेत र कास्कीका भीमप्रसाद न्यौपानेसमेत छन् ।
प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा मृगौला बेचविखनमा विकासहित ५ जनाको समूह सक्रिय रहेको पाइएको छ । दुईजना भने अझै फरार छन् । नारायण नेपाली र अमृत गुरुङ र डल्ली गुरुङ फरार छन् । डल्ली भट्टी चलाउने महिला भएको बताइएको छ ।
प्रहरीका अनुसार काठमाडौंमा बिकास र प्रकाशले ग्राहक खोज्थे । भीम न्यौपानेसँग मिलेर विभिन्न स्थानबाट जागिरको प्रलोभनमा परेर काठमाडौं ल्याउने काम गर्दै आएका थिए ।
यसरी ल्याइएका मानिसहरूलाई कामका लागि भनी स्वास्थ्य परीक्षण गरेर ब्लड ग्रुप पत्ता लगाउने गरेका थिए ।
उनीहरूले अहिसेसम्म ५ जनाभन्दा बढीको किड्नी झिकेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । किड्नी तस्करीमा संलग्नमध्ये भीमले करिव तीन वर्ष पहिले पैसाकै लागि आफ्नै किड्नी बेचेको पाइएको छ । त्यसपछि उनले यसलाई तस्करीको पेशा नै बनाए ।
प्रहरीका अनुसार यो समूहले ५ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्ममा किड्नी बेच्ने गरेको पाइएको छ ।
नेपालसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने चीनको घोषणा
285 Views काठमाडौंः उत्तरी छिमेकी चीनले सन् २०१७ मा नेपालसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने घोषणा गरेको छ । चिनियाँ रक्षामन्त्रालयका प्रवक्ताले बिहीबार यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
People’s Daily,China ✔@PDChina
#China and #Nepal will hold their first joint military training in 2017, Chinese MOD spokesperson said on Thu
11:54 AM – 29 Dec 2016
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओलाई सरकारले सोध्यो स्पष्टीकरण
236 Views १४ पुस, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ज्ञवालीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।
उनीमाथि उनीमाथि निर्देशक समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको, अनुदान बापतको रकम समयमा उपलब्ध नगराएको लगायतका आरोप छ । र। सातदिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि बनेको प्राधिकरणको कार्यशैलीप्रति सरकार असन्तुष्ट छ । र, मन्त्रिपरिषदका पछिल्ला बैठकहरुमा मन्त्रीहरुले प्राधिकरणका सीईओको कार्यशैली हुँदै भएन भनेर कुरा राख्दै आएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक विषय पनि भएको भन्दै एक पटक आफैं कुरा गर्ने बताए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीले ज्ञवालीलाई बोलाएर छलफल गर्नुका साथै कार्ययोजना पनि मागेका थिए ।
बिहीबारको बैठकमा पनि मन्त्रीहरुले यसबारे असन्तुष्टि जनाएपछि स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
ज्ञवालीलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सीईओ बनाएको हो । तर, जुनियरलाई सीईओ बनाएको भन्दै धेरै कर्मचारीहरु पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा जान नै मानेका छैनन् । र, पुनर्निर्माणको गति पनि निकै सुस्त देखिएको छ । प्राधिकरण गठन भएको एक वर्षमा ४१ हजार मात्र घर बनेको छ भने भूकम्प पीडितहरुको बिचल्ली भएको छ ।
यसैबीच प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवालीले प्रेस नोट जारी गर्दै वस्तुस्थितिको यथार्थ चित्रण सहित स्पष्टीकरण दिने बताएका छन् ।
स्थापनाको एक वर्षमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलेे आˆना कामहरु व्यवस्थित र योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाएको र त्यसका परिणामहरु एकपछि अर्काे गर्दै बाहिर आइरहेको उनले बताएका छन् । उनले भनेका छन्, वस्तुस्थितिको यथार्थ चित्रण सहित पेश गरिने स्पष्टिकरणले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा सम्बद्ध सरकारी निकायले गरेका तथा गर्नुपर्ने कार्यहरु, चुनौती र समस्याहरुको सम्बन्धमा थप स्पष्ट हुने तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन थप सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु ।’
बरिष्ठ साहित्यकार कमलमणि दीक्षितको निधन
177 Views काठमाडौः साहित्यकार कमलमणि दीक्षितको बिहिबार बिहान निधन भएको छ । दीक्षितको ८७ वर्षको उमेरमा बिहीबार बिहान २ः४५ बजे ललितपुरमा निधन भएको हो।
केही समयदेखि उनी श्वास प्रश्वासको समस्याबाट ग्रसित थिए । दीक्षितको केहीबेरमा पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टी गरिने बताइएको छ । दीक्षितका दुई छोरा र एक छोरी छन्।
मदन पुरस्कार पुस्तकालय तथा मदन पुरस्कार गुठीका अध्यक्षसमेत रहेका दीक्षितका पिता केदारमणि आचार्य तथा माता विद्यादेवी दीक्षितक माइला छोरा हुन् ।
दीक्षितको सकृयतामा नेपाली भाषा तथा साहित्यसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको अभिलेख राख्‍ने उद्देश्यका साथ २०१२ सालमा मदन पुरस्कार पुस्तकालय तथा मदन पुरस्कार गुठीको स्थापना भएको थियो । गुठी मार्फत् नेपाली भाषामा प्रकाशित हुने उत्कृष्ट पुस्तकका निम्ति प्रदान गरिने मदन पुरस्कार (२०१२ सालदेखि) र नेपाली भाषाको श्री-वृद्धिका लागि योगदान वापत प्रदान गरिने जगदम्बा(श्री पुरस्कार ९२०४५ सालदेखि) प्रदान गरिदै आएको छ।
यससँगै उनी मदन मेमोरियल स्कुल, साझा प्रकाशन, गोरखापत्र संस्थान, रोटरी क्लब, जनक(जानकी सभा, बीपी कोइराला संग्रहालय समिति, बीपी कोइराला नेपाल(भारत प्रतिष्ठान आदि जस्ता दर्जनौं भाषिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक संस्थाहरूमा सक्रिय थिए।
साहित्य क्षेत्रमा क्रियाशील दीक्षितका थुर्पै फुटकर रचना र करिब ६० वटा पुस्तक प्रकाशित छन् । दीक्षित साझा प्रकाशन, गोरखापत्र संस्थान, मदन मेमोरियल स्कुल, रोटरी क्लब, बीपी कोइराला संग्रहालय समितिलगायत दर्जनौं भाषिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक संस्थामा सक्रिय थिए।
दीक्षितको बिहीबार नै पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार गरिने परिवार स्रोतले जनाएको छ ।
मेलम्चीको सुरुङ निर्माणमा ब्रेक थ्रू, काठमाडौंबासीलाई दशैंमा पानी खुवाउने लक्ष्य
393 Views १३ पुस, काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको महत्वपूर्ण खण्डका रुवमा रहेको सुन्दरीजल-सिन्धुको सुरुङ खन्ने काम बुधबार पुरा भएको छ ।
कुल २७ मिलोमिटर सुरुङलाई तीन खण्डमा बाँडिएको थियो, जसमध्ये सुन्दरीजल-सिन्धुको साढे ९ किलोमिलोटिर सुरुङ खन्ने काम बुधबार सम्पन्न भएको छ । यसलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाकै महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू मानिएको छ ।
एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टर केनुची योकोहामाले सुरुङको अन्त्यमा प्रकाश देखिएको भन्दै चाँडै पानी बगाउने बताए । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईले भने, यो क्षण परियोजना ल्याउन भूमिका खेल्नेहरुका लागि खुसीको क्षण हो । सुरुङ निर्माणमा यो महत्वपूर्ण कदम हो ।’
सिन्धु-ग्यालथुङ र ग्यालथुङ-अम्बाथानको दुई खण्डको काम भने चलिरहेको छ । अब सुरुङ खल्ने काम करिव ५ किलोमिटर मात्र रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
सुरुङ निर्माणको अन्तिम चरणका काम हुँदै गर्दा काठमाडौंमा पनि पाइप विच्छ्याउने काम भइरहेको छ । आयोजना आगामी दशैंभिर काठमाडौंबासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने लक्ष्य राखेको छ ।
एडीबीको मुख्य दाता रहेको यो आयोजनको लागत २३ अर्बभन्दा बढी छ । र, आयोजना सम्पन्न भएवपपछि दैनिक १७ करोड लिटर पानी आउने बताइएको छ ।
मन्दिर उत्खनन् गर्दा मानव हड्डी ! (भिडियो रिपोर्ट)
562 Views काठमाडौंः काठमाडौंको जैसीदेवल मन्दिर उत्खननका क्रममा हड्डीका टुक्राहरु भेटिएका छन्। २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण भत्किएको पुरातात्विक महत्वको जैसीदेवल मन्दिर उत्खनन् गर्ने क्रममा हड्डीका टुक्राहरु भेटिएका हुन्।
मन्दिरको आधारबाट करिव ५० फिट मुनी हड्डीका टुक्राहरु भेटिएको पूरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुवँरले जानकारी दिए। विभागले हड्डीका टुक्राहरु परिक्षणका लागि बेलायत पठाउने जनाएको छ। संकलित हड्डीका टुक्राहरु परीक्षणका लागि वेलायतको दुरहाम विश्वविद्यालयमा पठाइने विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले बताए।
पुरातत्व विभागले भूकम्पका कारण भत्किएका पुरातात्विक महत्वका मन्दिरहरुको उत्खननको काम गरिरहेको छ। वसन्तपुरको काष्ठमण्डप र जैसिदेवल मन्दिरको उत्खनन् कार्य सकिएको छ भने जगन्नाथ, गोपीनाथलगायतका मन्दिरहरूको उत्खनन् कार्य पनि भइरहेको विभागले जनाएको छ।
तातोपानी नाका खोल्दा ‘फ्री तिब्बत’ को त्रास !
245 Views चौतारा: चिनियाँ अधिकारी तातोपानी नाकामा ‘एक चीन’ नीतिविपरीत गतिविधि हुन सक्ने भन्दै त्रसित भएका छन् । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासामा मंगलबार भएको सीमा सुरक्षा बैठकमा चिनियाँ अधिकारीले दलाई लामाका समर्थकले नाकामा चीनविरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।
अन्य नाकाको तुलनामा तातोपानी नाकामा ‘फ्री तिब्बत’ गतिविधि हुन नदिन आफूहरूले सजगता अपनाउने गरेको भन्दै सीमा सुरक्षा बैठकमा सहभागी चनियाँ सुरक्षा अधिकारीले बताएको बैठकमा सहभागी नेपाली अधिकारीले जानकारी दिए ।
नाका सञ्चालनका विषयमा चीन सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा आएका कमान्डर अफ बोर्डर कन्ट्रोल क्रप्स अफ तिब्बत पव्लिक सेक्युरिटी मेजर जनरल गाओ वानहाईले नाकामा हुन सक्ने फ्री तिब्बत गतिविधि नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्तरबहादुर सिलवालले जानकारी दिए ।
‘नाका सञ्चालन भएमा सबै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरी त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नेमा चिनियाँ टोलीलाई हामीले आश्वस्त पारेका छौं’, सिलवालले भने, ‘हाम्रो प्रतिबद्धतापछि उनीहरू पनि नाका सञ्चालन गर्ने विषयमा सकारात्मक भएका छन् ।’
बैठकमा गाओले बेइजिङसँग समन्वय गरेर छिटै नाका सञ्चालन गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिएको सिलवालले बताए । सुरक्षाका कारण मात्र नभएर पूर्वाधारका कारण पनि नाका सञ्चालनमा ढिलाइ भएको चिनियाँ पक्षको दाबी छ ।
बैठक सहभागीका अनुसार मितेरी पुलदेखि खासासम्मको १५ किलोमिटर सडक धेरै क्षति भएकाले नाका छिटो सञ्चालन हुन नसकेको चिनियाँ पक्षले बताएको थियो । ‘सडक मर्मतको काम द्रुत गतिमा भइरहेको रहेछ’, सिलवालले भने, ‘कामको रफ्तार हेर्दा छिटै नाका सञ्चालन हुनेमा म विश्वस्त छु ।’
चीनले न्यालममा भन्सारलगायतका कार्यालय राखेर नाका सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको पनि सिलवालले जानकारी दिए ।
यसअघि गत बुधबार न्यालम काउन्टीका सीडीओसँग चौतारामा सीमासुरक्षा बैठक भएको थियो । उक्त बैठकमा नाका खुलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार मंगलबार चीन सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा तिब्बत हेर्ने सुरक्षा प्रमुख खासा आएका थिए ।
सीमा जोडिएको न्यालम जिल्लाका अधिकारीसँग मात्र हुने गरेको सुरक्षा बैठक यसपटक तिब्बतकै प्रमुखसँग हुनुले नाका सञ्चालन छिटै हुने विश्वास बढेको सिलवालले बताए ।
चीनमा मात्र हैन भूकम्प र भोटेकोसी बाढीले क्षति पुर्‌याएको नेपालको मितेरी पुलदेखि १० किलोसम्म र जुरे पहिरो क्षेत्रमा पनि चीन सरकारले सडक मर्मत गरिरहेको छ । अरनिको राजमार्गको बाह्रबिसेदेखि जम्बुसम्म सडक विभागले मर्मत गरिरहेको छ । चीनले छिट्टै नाका सञ्चालनमा ल्याउने आश्वासन दिए पनि तातोपानीमा भन्सारलगायतका कार्यालय मर्मतमा भने सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।
गोपालबंशी राजाले गरेको अत्याचारको क्षतिपूर्ति उपेन्द्र यादवसँग माग्न मिल्दैनः योगेश
531 Views १३ पुस, काठमाडौं । एमाले सचिव योगेश भट्टराई बुधबार दिउँसो राजधानीमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित भए । त्यहाँ मधेसी मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरसमेत सहभागी थिए । राप्रपा छाडेर नयाँ शक्ति पार्टीमा लागेका पर्शुराम खापुङ पनि योगेशको नजिकै थिए ।
विगतको सामन्ती सत्ताले गरेको विभेदको दोष अहिलेको पुस्तालाई लगाउन नमिल्ने एमाले नेता भट्टराईले तर्क गरे । उनले उपेन्द्र यादवको नामै लिएर भने- ‘उहिले गोपालवंशी राजाले गरेको अत्याचारको क्षतिपूर्ति उपेन्द्र यादवले तिर्नुपर्दैन ।’
यति भनिसकेपछि एमाले नेता भट्टराईले खापुङतिर फर्केर भने- ‘त्यस्तै, किरात राजाले गरेको अत्याचारको क्षतिपूर्ति पर्शुराम खापुङसँग माग्न मिल्दैन ।’
लाजिम्पाटस्थित होटल सांगि्रलामा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले संविधान संशोधन र अबको निकासका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । एमाले नेता योगेश निकै ढीलो गरी कार्यक्रममा पुगेका थिए ।
उनी पुग्दा डा. बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव लगायतले बोलिसकेका थिए । ढीलो पुगेका भट्टराईले एमालेलाई सत्तापक्षले एक्ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए । एमालेलाई एक्ल्याएर कसैले अघि बढ्न सोचेको छ भने त्यो पूरा नहुने र एमाले यसबाट नआत्तिने भट्टराईले बताए । एमाले एक्लै भए पनि उभिन तयार रहेको तर एमालेलाई उपेक्षा गरेर देश अघि बढ्न नसक्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा कमीज सुरुवाल र कालो इस्टकोटमा सजिएर आएका महन्थ ठाकुरतिर लक्षित गर्दै एमाले नेता भट्टराईले भने- ‘उहाँलाई सेतो ड्रेसमा कालो लुगा राम्रोसँग सुहाएको छ, रंगको ‘कन्ट्रास्ट’ राम्रो देखिएको छ । यहाँ उपस्थित महानुभावका सामु एमाले पनि त्यस्तै फरक रंग हो ।’
ऐना पुछेर अनुहारको कालो जाँदैनः उपेन्द्र यादव
सोही कार्यक्रममा योगेश भट्टराई भन्दा अगाडि बोलेका मधेसी मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवले पनि रंग र मिथक मिसिएको सम्वोधन गर्न चुकाएनन् ।
यादवले अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्तावले पनि मधेसी र आदिवासी जनताजाति मागहरुको पूर्णरुपमा सम्वोधन नहुने ठोकुवा गर्दै भने- अनुहारमा लागेको कालो ऐनामा पुछेर हट्दैन, अनुहार नै धुनुपर्छ ।
अहिलेको सत्ताधारी वर्गको मानसिकतामा नै खराबी भएकाले सत्तापक्षले पुरानो ‘माइण्ड सेट’ नबलेसम्म समस्या समाधान नहुने यादवले बताए ।
साथै उनले अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचार गरेको हुनाले देशमा विकास नभएको भन्दै कार्यक्रममा सहभागी कांग्रेस नेताहरुमाथि कटाक्ष गरे ।
संविधान संशोधनमा एमाले लचिलो, प्रस्ताव परिमार्जन गर्न प्रचण्ड तयार बाबुरामले मधेसी नेतालाई भने- आन्दोलनको रापताप छैन, सहमतिमा आउनोस्
617 Views १३ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो नेतृृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्न तयार भएका छन् ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव स्थगन गर्नुपर्ने कडा अडान राख्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि सीमांकनको बुँदामात्रै हटाइएको अवस्थामा अन्य विषयमा संसदमा छलफल गर्न आफू तयार रहेको ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्न तयार रहेको ‘खुलासा’ गरेका हुन् ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड के विषयमा परिमार्जन गर्न तयार देखिएका हुन् भन्नेबारे भट्टराईले बताउन चाहेनन् । उनले यसबारे आफूलाई जानकारी रहेको दाबी गरे ।
प्रचण्डसँग आफूले गरेको व्यक्तिगत भेटमा प्रस्ताव परिमार्जनको संकेत पाएको डा. भट्टराईले बताए । बुधबार होटल सांगि्रलामा नयाँ शक्ति पार्टीले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै डा. भट्टराईले भने- ‘कहाँ-कहाँ परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि प्रधानमन्त्रीजीले थोरै सेयर गर्नुभएको छ, अहिले नै म यहाँ भन्दिनँ । तर, विकल्प खोज्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’
पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सघन छलफलमा जुटेका डा. भट्टराईले अगाडि भने- ‘प्रधानमन्त्रीजीले अहिले संसदमा जुन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ, उहाँसँग पर्सनल्ली कुरा गर्दा दलहरुसँग सहमति हुने हो भने यसलाई थोरै परिमार्जन गरेर आन्दोलनकारी शक्तिहरुलाई विश्वासमा लिएर जान तयार भएको संकेत मैले पाउँछु ।’
तर, यसका निम्ति अब एमाले र सरकारवीच सम्वाद जरुरी रहेको डा. भट्टराईले बताए । उनले भने- ‘सरकार परिवर्तनको खेलले पनि अलिकति असर गरेको जस्तो लाग्छ । यो इगोले पनि काम गरेको जस्तो लाग्छ । यदि पावर सेयरिङको विषयले हो भने पनि एउटा समझदारी बनाएर एमाले र सरकारवीचमा सम्वाद बढाएर आन्दोलनकारी शक्तिहरु, संसदमा भएका र बाहिरका शक्तिहरुसँग सम्वाद बढाएर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’
एमालेको बटम लाइनः सीमांकन फिर्ता लिनोस्, अन्य बुँदामा छलफल गरौं
यसैवीच संविधान संशोधन प्रस्ताव स्थगन गरेर चुनावमा जानुपर्ने माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि संविधान संशोधनमा केही लचिलो हुने संकेत दिएको छ ।
सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव स्थगन गर्न सक्दैन भने सीमांकनको बुँदामात्रै फिर्ता लिए आफूहरु अन्य बुँदामा संसदमा छलफल गर्न तयार रहेको एमाले नेताले बताएका हुन् ।
बुधबार सांग्रिलाको कार्यक्रममा बोल्दै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने- ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव स्थगन गरेर चुनावमा जाऔं । त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्न भने सीमांकनको प्रस्ताव फिर्ता लिनोस्, अरु विषयमा छलफल गर्न नेकपा एमाले तयार छ ।’
एमाले नेता भट्टराईले अगाडि भने- ‘तर, सीमांकनको विषयमा भने संसदमा छलफल हुन सक्दैन । किनभने यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।’
सचिव योगेश भट्टराईले लचकदार कुरा गरे पनि बुधबार नै सिंहदरबारमा भएको तीन दलको छलफलमा भने एमाले नेताहरु संशोधन प्रस्तावका विषयमा निकै कडारुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
मधेसी मोर्चालाई फकाउने बाबुरामको प्रयास
नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले मधेसी मोर्चालाई समेत फकाउन थालेका छनु । प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन प्रस्तावमा परिमार्जन गर्छु भनिसकेपछि अब मधेसी मोर्चा पनि सहमतिमा आउनुपर्ने र अहिलेका उपलब्धिहरु जोगाउनुपर्ने डा. भट्टराईको सुझाव छ ।
बुधबार आयोजित संविधान संशोधनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा डा. भट्टराईले महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवतिर संकेत गर्दै भने- ‘सकारात्मक ढंगले सोचौं । राजनीति भनेको शक्ति सन्तुलनको अभ्यास पनि हो । त्यसैले शक्ति सन्तुलन अलि फरक भएको अवस्थामा हामीले वार्ता र सम्वादबाट एउटा सहमति खोज्नुपर्छ । हामीले थोरै ‘गिभ एण्ड टेक’ गरेर यो उपलब्धि जोगाउनुपर्छ ।
डा. भट्टराईले भने- ‘विगतमा हामीले चुक गरेकै हौं, अहिले आन्दोलनको रापताप पनि छैन । त्यसैले शक्ति सन्तुलनलाई विचार गर्दै आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले पनि सहमतिमा आउनुपर्छ ।’
मोर्चाका नेता के भन्छन् ?
कार्यक्रममा उपस्थित रहेका मधेसी मोर्चाका नेताहरुले भने संविधान संशोधन नगरी चुनाव गर्ने तयारीमा तीन दल लागेको भन्दै आशंका गरेका छन् । संघीय गठबन्धनका नेता उपेन्लद्र यादवले संविधान संशोधन नगरी स्थानीय चुनाव हुनै नसक्ने बताए ।
यादवले अहिलेको संशोधनले पनि मधेसी र जनजातिका समस्या समाधान नगर्ने बताए ।
बुधबारकै दिन सिंहदरबारमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरुवीच तीनदलीय छलफल भएको र चाँडै चुनावको मिति तोक्ने सहमति भएको खबरले पनि मधेसी मोर्चाका नेताहरु झस्किएका हुन् ।
यसरी नजिकिँदैछन् देउवा–ओली, बालकोटमा रात्रिभोज, प्रचण्ड सशंकित
266 Views काठमाडौं, १३ पुस । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा पत्नी आरजु राणा देउवालाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले रात्रिभोज दिएर परामर्श गरेका छन् ।
गत सोमबार ओलीको बालकोटस्थिति निवासमा दिइएको भोजसहितको संवाद राजनीतिक दृष्टिले अर्थपूर्ण रहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हरतरहले असफल प्रमाणित गर्न सक्रिय ओली र प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतीक्षामा रहेका सभापति देउवाबीचको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण मान्नुपर्ने विभिन्न कारण रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । घटना र विचार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
रात्रिभोजका अवसरमा संविधान संशोधनका विषयमा छलफल हुन दिनु उचित हुने विचार सभापति देउवाले प्रकट गर्दा अध्यक्ष ओलीले संशोधन प्रस्ताव वास्तावमै राष्ट्रघाती र असंवैधानिक भएकोले फिर्ता लिुनको विकल्प नरहेको धारणा दोहोराएका थिए ।
जुन विषयमा छलफल गर्नुको कुनै अर्थ छैन त्यस विषयमा बहस गर्नु व्यर्थ हुन्छ भन्ने जवाफ ओलीले दिएपछि देउवाले मधेसी मोर्चालाई कसरी मनाउने त भनी जिज्ञासा प्रकट गरेका थिए ।
चुनवाको मिति घोषणा गरौँ त्यसपछि सबै ठीक हुँदै जान्छ भन्ने ज वाफ ओलीले दिएको र त्यसमा देउवाले सहमति जनाएको स्रोतले जनाएको छ । रात्रिभोजमा प्रचण्ड नेतृत्वलाई विस्थापित गर्नुपर्ने धारणा ओलीले प्रकट गरेका थिए ।
Page 10 of 230« First...«89101112	»	203040...Last »	Recent Posts